Daraasad Cusub: Khabiir Cilmi Nafsiga yaqaan oo Fasiray 9 Kamid Riyooyinka ugu badan ee dadku ku riyoodaan (Sawiro) | | Puntland Vision
7 March (Puntland Vision)–Dad badan oo cilmi nafsiga ku takhasusay ayaa in badan ku dadalayay inay tarjumaan riyada dadku ku riyoodaan.Khabiirkan cilmi nafsiga, Ian Wallace ayaa fasiray 150 kun oo riyo, muddo 30 sano ah.Haddaba wuxuu khabiirkaasi isku soo koobay 9-ka riyo ee ugu badan ee soo noq noqda ee dadku ku riyoodaan. Akhriste waa laga yaabaa inaadan qaarkood wali ku riyoon hase ahaatee waxaa la hubaa intaad noolayd inaad in badan mid ama laba ku riyootay
Adigoo Raadinaya Qol aan la isticmaalin
Maxaa lagu fasiray: qolka aad ku riyootay wuxuu u dhigmaa qayabaha dabeecaddaada. Raadinta qolka aan la isticmaalin waxay u dhigantaa inaad doonayso inaad rabto inaad soo bandhigto xirfad cusub oo aadan horay u aqoon.
Adigoo Bareeggii ka waayay gaarigaaga
Maxa lagu fasiray: Gaariga wuxuu u dhigmaa awoodda aad u leedahay samaynta horumar joogto ah, gaar ahaan arin gaar ah oo aad horumar ka samayso. Markaad soo jeeddid waxaad dareemi kartaa inaadan si quman aadan u xakamayn Karin waddada aad u qaadayso guusha.
Adaoo meel kasoo dhacaya
Maxaa lagu fasiray: Haddii aad ku riyootid adigoo meel kasoo dhacaya, waxay u dhigantaa, waxaa ku haysta xaalad aad xallin kari la’adahay, ha ahaato arin qoys ama arin kale . Markaas waxaa u baahan tahay intaad is dajiso inaad hawshaas si deggen u xalliso.
Maxaa loola jeeda? : Adigoo duulaya bilaa diyaarad, waxay u dhigantaa, inaad ka guulaysatay xaalad ku haysatay oo aad iska xoraysay. Waxay kaloo udhigantaa adigoo go’aan wanaagsan balse adag gaaray si aad culays isaga dajiso.
Adigoon u diyaar garoobin Imtixan
Maxaa lagu fasiray:: Imtixaanka waxa uu u dhigmaa awooddaada aad shay ku qaban karto, markaas waxay u dhigantaa adigoo qiimayn xooggan ku haya awooddaada inaad arin gaar ah qaban karto iyo in kale. Khubarada waxay ku taliyen haddad riyadan aragto u dabbaaldag gushaada ha isku mashquulin arin hebel goormaa ka guul gaari kartaa.
Maxaa lagu fasiray: waxaan dharka u dooranaa inay matalaan sumcaddeena ay noo hayaan dadka noo dhow. Marka haddii aad ku riyootid adigoo qaawan, waxaa jirta arin ama xaalad aad qarinayso oo haddii aad sheegto ceeb kaasoo gaari karto
Adigoo Mushqushii waayay meelay kutaallo
Maxaa lagu asiray: Musqulaha ama Suuliyada waxay astaan u yihin sidii aan si qumaati ah jawab uga bixin lahayn baahideenna nadaafadeed, . Waxaa jirta baahi adiga ku hortaalla oo xallin kaaga baahan, sidaa daraadeed, waxay u baahan tahay arimaha adiga kuu yaalla inaad xalliso intaad qof kale kiisa xallin lahayd.
Adigoo ilig kaa dhacay
Maxaa lagu Fasirays: Iligaagga wuxuu astaan u yahay, heerka kalsooni iyo awood ee aad isku qabto. Marka haddii ilig kaa dhoco, Waxaa ku qabsatay hawl ama arin haddii aad samayso aad isku arkayso qof awooddiisii dhaawac gaaray.
Adigoo Lagu cayrsanayo
Maxaa lagu fasiray: Waxaa jira Mushkilad kusoo wajahday oo noloshaada la xiriirta, balse aadan aqoon sidaad u wajihi lahayd. Tani waa fursad khubarada waxay soo jeediyeen inaad raadiso habab kuu gaar ah oo arimahaasi aad ku xalliso.